विकास | Corporate Nepal
कोटेश्वरदेखि जडीबुटीसम्मको सडक निर्माण छिट्टै सकिने, सवारी जाम कम हुने
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको बढी सवारी चाप हुने कोटेश्वरदेखि जडीबुटीसम्म सडक विस्तारको काम एकातर्फ अबको एक महिनामा सक्ने गरी अघि बढाइएको छ । कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदा दाहिनेतर्फ सबै संरचना हटाएर…
काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै स्थानमा अझै वितरण भएन मेलम्चीको पानी
काठमाडौँ । मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनिएका काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय स्थानमा आवश्यक संरचना नबनेका कारण पानी वितरण हुनसकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा चक्रपथभित्र धेरै ठाउँमा खानेपानी वितरण गरिरहे पनि आयोजना क…
बुटिक बनाउन रिनोभेसन सकियो, ३० करोड खर्चिएपछि कस्तो हुँदैछ त्रिभुवन विमानस्थल ?
काठमाडौं । सरकारले विदेशी पर्यटकको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिएको काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै नमूना विमानस्थलको बनाउने र बुटिक विमानस्थलको झल्को दिने गरी थालेको रिनोभिसनको काम करिब सकिएक…
चैत २८, २०७७ शनिबार
काठमाडौँ । अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्याण्डफिलसाइटमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ । केही समय कोरोना भा…
तनहुँ हाइड्रोको प्रसारणलाइन प्रभावितहरूलाई मुआब्जा दिने तयारी, कस्ले कति पाउँछन् ?
तनहुँ । एक सय ४० मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि व्यक्ति तथा सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण गरेपछि प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको छ । जिल्लाको…
प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीमा देखाएको तमासा अब माथिल्लो तामाकोशीमा हेर्न पाइन्छः गगन
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले उदघाटन र शिलान्यासको नाममा प्रधानमन्त्री केपी आली र वर्तमान सरकारले तमासा देखाएको बताएका छन् । संसदमा बोल्दै बिहीबार उनले १५–२० बर्ष ढिलो गरी सम्पन्न गरेको मे…
महमारीकैबीच पाँचतारे स्तरको होटल बनाउँदै एमएस ग्रुप, कमलादीमा तेस्रो होटल बन्दै
काठमाडौं । कारोना महामारीले विश्वकै पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ । महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रसमेत सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो । पर्यटन क्षेत्र पूर्ण प्रभावित भएका कारण यो क्षेत्रबाट केही व्यवसायी स…
स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोसी अन्तिम चरणमा, आगामी वैशाखदेखि बिजुली आउने
चैत २५, २०७७ बुधबार
काठमाडौं । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको र अब बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन, सबस्टेसनलगायतका संरचनाका सिभिल र मेकानिकलत…
प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र शिलान्यासमा हतारो, बजेट बिनानै १२ वटा नयाँ सहर शिलान्यासको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ चैत (शनिवार) बालुवाटारबाटै १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हरेकमा एकएक वटा पर्ने गरी रणनीतिक सडक पूर्वाधारहरूको एकैपटक शुभारम्भ (शिलान्यास) गरेका थिए । पूरा नभएका आयो…
भैँसीगोठलाई विस्थापन गर्दै खुले सुविधा सम्पन्न होटेल, मर्दी हिमाल पदयात्रीले पाए सुविधा
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जः एकवर्षमा ४ सय पर्यटन पनि जाँदैनन्, किन यस्तो ?